လီမင်ဟိုမှာ ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေရှိနေတာ သိပြီးပြီလား? – Trend.com.mm
လီမင်ဟိုမှာ ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေရှိနေတာ သိပြီးပြီလား?
တောင်ကိုရီးယားအနုပညာရှင်မင်းသားချောလီမင်ဟိုဟာ အခုလတ်တလောမှာ စစ်မှုထမ်းဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ခုနှစ်၊မေလမှ စစ်မှုထမ်းဆောင်လို့ပြီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့မင်းသားဆိုတာလည်း လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်လို့ ကိုယ်တွေလိုပဲ လူအများမသိစေချင်တဲ့အကျင့်လေးတွေရှိပါတယ်တဲ့။ဥပမာ မနက်စောစောထဖို့ပျင်းတာ ၊လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ပျင်းတာ အဲ့ဒီလိုလေးတွေပေါ့။လီမင်ဟိုမှာရှိတဲ့ ရယ်စရာကောင်းပြီး ချစ်စရာလည်းကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေအကြောင်းပြန်ပြီးဖောက်သည်ချလိုက်ပြီနော်။ ယူတို့ရဲ့ အိုပါးမှာ ဘယ်လိုအကျင့်လေးတွေရှိလဲဆိုရင်…
၁)လီမင်ဟိုက မနက်စောစောထရမှာမကြိုက်ပါဘူးတဲ့ (ကိုယ်တွေလိုပဲ)
၂)အရက်သောက်ရတာလည်းမကြိုက်ပါဘူးတဲ့။သောက်ခိုင်းရင်တောင် ဘယ်သူမှ သူ့ကိုကြည့်မနေဘူး ဆိုရင် တိတ်တိတ်လေးလွှင့်ပစ်တတ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရက်သောက်ပြီးရင် သိတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကိုမြင်နေလို့ပါ။
၃)အလုပ်တွေအားလုံးပြီးလို့ သူတွေးမိတဲ့အတွေးအားလုံးက စားဖို့ပါပဲတဲ့။(ချစ်စရာလေးနော့)
၄)သူမနက်နိုးလာတဲ့အခါမှာလည်း သူ့ဆံပင်တွေရှုပ်ပွနေတာကို တစ်ခြားသူတွေမမြင်အောင် အရမ်းသတိထားတတ်ပါသေးတယ်။
၅)ဘယ်လိုဝတ်ဝတ်ကြည့်ကောင်းပေမဲ့ သူအမြဲတမ်းကြိုက်နှစ်သက်စွာဝတ်ဖြစ်တဲ့စတိုင်လ်က တီရှပ်နဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီတွေပါပဲ။
၇)သရုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်စေ၊ကြေ်ာငြာရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေ ပုံမှန်စကားမဟုတ်ပဲ ချစ်စကား၊ခင်စကားပြောရတာမျို၊အမူအရာလုပ်ပြရတာမျိုးဆို ကြက်သီး ထလာတတ်ပါတယ်။
၈)ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ သူက မျက်နှာဘယ်ဘက်ခြမ်းကို ပိုမြင်စေဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်တဲ့။ များသောအားဖြင့်ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းပေးပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။
၉)ရှုတင်းရောက်နေလည်း မှန်ကြည့်မပျက်၊မှန်ကြိုက်တဲ့ ကိုယ်တော်လေးပါ။
၁၀)ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ဘာသာစကား ၈မျိုးနဲ့ပြောတတ်ပါတယ်တဲ့။တရုတ်စကားကိုမှ နှစ်မျိုး၊ဂျပန်၊ကိုရီးယား၊အင်ဒိုနီးရှား၊အင်္ဂလိပ်၊ဗီယက်နမ်၊သြစတေးလျ စတဲ့ဘာသာစကားတွေနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်။(အဲ့လဲ့)
၁၁)အားကစားလုပ်ရတာကြိုက်ပြီး အထူးသဖြင့် တင်းနစ်စ်ရိုက်တဲ့ကစားနည်း ကိုပိုပြီးကြိုက်ပါတယ်။ဘယ်သူမှသူ့ကိုနိုင်အောင်မရိုက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဂုဏ်အယူဆုံးပါတဲ့။ တကယ်တော့ ပုံမှန်လောက်ပါပဲ။(ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်းပဲနော့ အချေတလိုင်း)
၁၄)သူအကြိုက်ဆုံး လက်ဝတ်တန်ဆာကတော့ လက်ကောက်နဲ့နေကာမျက်မှန်ပါ။အဲ့ဒါတွေကို တစ်ခါမှမေ့ပြီးကျန်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။
၁၅)သူ့ဘာသူမသိပဲလုပ်မိနေတာကတော့ မကြာခဏဆိုသလို လျှာထုတ်ပြီးနှုတ်ခမ်းကိုသပ်တာပါပဲ။
၁၆)ရေကောင်းကောင်းမကူးတတ်ပါဘူး။ငယ်ငယ်တုန်းက ရေနစ်လုနီးပါးဖြစ်ဖူးလို့ ရေအရမ်းကြောက်ပါတယ်တဲ့။
၁၇)Cristiano ronaldo က သူအကြိုက်ဆုံးကစားသမားဖြစ်လို့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးမှာအလုပ်ရှုပ်နေရင်တောင် သူ့သတင်းတွေကိုကြည့်လေ့ရှိပါတယ်။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် မင်းသားချောလေးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေကို သိပြီးလောက်ရောပေါ့နော်။လီမင်ဟိုရဲ့ ပရိသတ်တွေလည်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ် လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
တောငျကိုရီးယားအနုပညာရှငျမငျးသားခြောလီမငျဟိုဟာ အခုလတျတလောမှာ စဈမှုထမျးဆောငျနဆေဲဖွဈပွီး ၂၀၁၉ခုနှဈ၊မလေမှ စဈမှုထမျးဆောငျလို့ပွီးမှာ ဖွဈပါတယျ။ဒီလိုပြိုတိုငျးကွိုကျတဲ့မငျးသားဆိုတာလညျး လူတဈယောကျပဲဖွဈလို့ ကိုယျတှလေိုပဲ လူအမြားမသိစခေငျြတဲ့အကငျြ့လေးတှရှေိပါတယျတဲ့။ဥပမာ မနကျစောစောထဖို့ပငျြးတာ ၊လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဖို့ပငျြးတာ အဲ့ဒီလိုလေးတှပေေါ့။လီမငျဟိုမှာရှိတဲ့ ရယျစရာကောငျးပွီး ခဈြစရာလညျးကောငျးတဲ့အကငျြ့လေးတှအေကွောငျးပွနျပွီးဖောကျသညျခလြိုကျပွီနျော။ ယူတို့ရဲ့ အိုပါးမှာ ဘယျလိုအကငျြ့လေးတှရှေိလဲဆိုရငျ…
၁)လီမငျဟိုက မနကျစောစောထရမှာမကွိုကျပါဘူးတဲ့ (ကိုယျတှလေိုပဲ)
၂)အရကျသောကျရတာလညျးမကွိုကျပါဘူးတဲ့။သောကျခိုငျးရငျတောငျ ဘယျသူမှ သူ့ကိုကွညျ့မနဘေူး ဆိုရငျ တိတျတိတျလေးလှငျ့ပဈတတျပါတယျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရကျသောကျပွီးရငျ သိတဲ့အတိုငျးဖွဈလာမယျ့အကြိုးဆကျတှကေိုမွငျနလေို့ပါ။
၃)အလုပျတှအေားလုံးပွီးလို့ သူတှေးမိတဲ့အတှေးအားလုံးက စားဖို့ပါပဲတဲ့။(ခဈြစရာလေးနော့)
၄)သူမနကျနိုးလာတဲ့အခါမှာလညျး သူ့ဆံပငျတှရှေုပျပှနတောကို တဈခွားသူတှမေမွငျအောငျ အရမျးသတိထားတတျပါသေးတယျ။
၅)ဘယျလိုဝတျဝတျကွညျ့ကောငျးပမေဲ့ သူအမွဲတမျးကွိုကျနှဈသကျစှာဝတျဖွဈတဲ့စတိုငျလျက တီရှပျနဲ့ဂငျြးဘောငျးဘီတှပေါပဲ။
၇)သရုပျဆောငျနတေဲ့အခါမှာဖွဈစေ၊ကျွောငွာရိုကျကူးတဲ့နရောမှာဖွဈစေ ပုံမှနျစကားမဟုတျပဲ ခဈြစကား၊ခငျစကားပွောရတာမြို၊အမူအရာလုပျပွရတာမြိုးဆို ကွကျသီး ထလာတတျပါတယျ။
၈)ဓာတျပုံရိုကျတဲ့အခါမှာ သူက မကျြနှာဘယျဘကျခွမျးကို ပိုမွငျစဖေို့ဆန်ဒရှိပါတယျတဲ့။ မြားသောအားဖွငျ့ဘယျဘကျကိုစောငျးပေးပွီးရိုကျထားတဲ့ပုံတှကေိုမွငျတှရေ့မှာပါ။
၉)ရှုတငျးရောကျနလေညျး မှနျကွညျ့မပကျြ၊မှနျကွိုကျတဲ့ ကိုယျတျောလေးပါ။
၁၀)ခဈြတယျဆိုတဲ့စကားကို ဘာသာစကား ၈မြိုးနဲ့ပွောတတျပါတယျတဲ့။တရုတျစကားကိုမှ နှဈမြိုး၊ဂပြနျ၊ကိုရီးယား၊အငျဒိုနီးရှား၊အင်ျဂလိပျ၊ဗီယကျနမျ၊သွစတေးလြ စတဲ့ဘာသာစကားတှနေဲ့ပွောနိုငျပါတယျ။(အဲ့လဲ့)
၁၁)အားကစားလုပျရတာကွိုကျပွီး အထူးသဖွငျ့ တငျးနဈဈရိုကျတဲ့ကစားနညျး ကိုပိုပွီးကွိုကျပါတယျ။ဘယျသူမှသူ့ကိုနိုငျအောငျမရိုကျနိုငျဘူးဆိုပွီးဂုဏျအယူဆုံးပါတဲ့။ တကယျတော့ ပုံမှနျလောကျပါပဲ။(ရုပျရှငျထဲကအတိုငျးပဲနော့ အခတြေလိုငျး)
၁၄)သူအကွိုကျဆုံး လကျဝတျတနျဆာကတော့ လကျကောကျနဲ့နကောမကျြမှနျပါ။အဲ့ဒါတှကေို တဈခါမှမပွေီ့းကနျြခဲ့တာမရှိပါဘူး။
၁၅)သူ့ဘာသူမသိပဲလုပျမိနတောကတော့ မကွာခဏဆိုသလို လြှာထုတျပွီးနှုတျခမျးကိုသပျတာပါပဲ။
၁၆)ရကေောငျးကောငျးမကူးတတျပါဘူး။ငယျငယျတုနျးက ရနေဈလုနီးပါးဖွဈဖူးလို့ ရအေရမျးကွောကျပါတယျတဲ့။
၁၇)Cristiano ronaldo က သူအကွိုကျဆုံးကစားသမားဖွဈလို့ ရုပျရှငျရိုကျကူးရေးမှာအလုပျရှုပျနရေငျတောငျ သူ့သတငျးတှကေိုကွညျ့လရှေိ့ပါတယျ။
ကဲ ဒီလောကျဆိုရငျ မငျးသားခြောလေးရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့အကငျြ့လေးတှကေို သိပွီးလောကျရောပေါ့နျော။လီမငျဟိုရဲ့ ပရိသတျတှလေညျးကနြေပျကွလိမျ့မယျ လို့မြှျောလငျ့ပါတယျ။